Taariikhdeena | HONGGUANG HANDAN CAST FOUNDRY CO., LTD
Waxa laga aasaasay Hongguang Foundry oo ka tirsan Degmada Jize, ee Gobolka Hebei, iyada oo la diiwaangeliyey raasamaal dhan 500,000 yuan, badeecooyinka waxaa loo iibgeeyaa suuqyada Yurub iyadoo dakhligoodu yahay 7.04 million yuan.
Laga soo bilaabo habka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga illaa wax soo saarka mashiinka wax lagu duubo.
Waxaa loo qiimeeyay inay tahay ganacsi ilaalin muhiim ah magaalada.
Fur suuqa Mareykanka, qaado mashaariicda macaamiisha Mareykanka, oo soo bandhig khad waxsoosaarka ciidda.
Bangiga Beeraha ee Shiinaha waxaa lagu qiimeeyay inay tahay shirkad amaah ah oo buundada AAA ah sanadkii 2001.
Bishii Juun 2000 Zhongtong Steel Structure Construction Co., Ltd ayaa la sameeyay.
Waxaa loo beddelay Handan Avision Foundry Co., oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 5 milyan oo yuan.
Waxaa la gudoonsiiyey cinwaanka "horumarka gobolka Jize ee shirkadaha horumarsan ee gaarka loo leeyahay".
Ku soo biir Rugta Ganacsiga Shiinaha soo dejinta iyo dhoofinta alaabada farsamada iyo korontada.
Ku guuleysiga kiiskii ugu horreeyay ee ka hortagga daadinta ee warshadaha macdanta ayaa ku guuleysan doonta qolka shirkadaha macdanta ee Shiinaha ee horumarinta caalamiga ah.
Bangiga Beeraha ee Shiinaha waxaa lagu qiimeeyay inuu yahay shirkad deynsatay heerka AAA sanadkii 2004.
Iyadoo loo marayo shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO90001 iyo shahaadada BSI.
Maalgeli dhismaha ZZ416B sanduuqa kala-goynta toosan ee khadka wax soo saarka wax taaj oo kale oo durdur la'aan ah.
Waxaa lagu qiimeeyay inay tahay ganacsi magaalo aad u fiican, cashuur bixiye iyo shirkad xidig leh.
Qeybinta labaad ee toosan oo aan lahayn khadadka wax soo saarka wax lagu duubo ee sanduuqa la maalgashaday.
Isweydaarsigu wuxuu dhaafey 100 milyan yuan waxaana laga qaadaa 10 milyan 350 kun yuan.
Shirkadda ayaa cusbooneysiisay oo bedeshay, sii ballaarineysaa wax soo saarka, waxayna soo bandhigeysaa xariiq toos ah oo toos ah oo wax soo saar cadaadis wata oo leh soosaar sanadle ah oo gaaraya 15,000 tan oo shub ah
Raasamaalka diiwaangashan waxaa loo beddelay 20 milyan yuan.
Machadka Cilmi-baarista injineernimada dowladda hoose ee Beijing "daboolida birta daboolida" sameynta heerka warshadaha wax soo saarka.
Kaqeybqaado aasaasida Ururka Macdanta Shiinaha "heerka warshadaha ee daboolida birta ductile, godadka iyo qalabka".
Ku biiritaanka Ururka Macdanta Shiinaha, cashuurta la bixiyay ilaa dhamaadka sanadka waxay ahayd 100 milyan yuan.
Raasamaalka diiwaangashan waxaa loo beddelay 50 milyan oo yuan.
Shirkaddu waxay si madax-bannaan u baartay una soo saartay foornada isku-beddesha gubashada oksijiinta si ay u xalliso wasakheynta deegaanka ee ay keento dhalaalka cupola.
Isticmaalka buuxa ee gaaska dabiiciga ah iyo tikniyoolajiyadda gubashada oksijiinta saafi ah waxay ka tarjumaysaa mas'uuliyadda bulshada iyo fikradda ganacsi ee horumarsan ee Casting Hongguang iyo Qalabka Tamarta Buluugga ah iyadoo laga jawaabayo keydinta tamarta qaranka iyo yareynta qiiqa, kaarboon hooseeya iyo ilaalinta deegaanka. Mashruucani wuxuu leeyahay ahmiyad weyn oo ilaalinta deegaanka iyo faa'iidooyin bulsho.